Dastabej » बङ्गुरपालनमा रमाउँदै किसान
बङ्गुरपालनमा रमाउँदै किसान – Dastabej
बागलुङ, २१ पुस (रासस) ःविदेशको सपना लत्याउनुभएका २९ वर्षीय मिलन राना अहिले बङ्गुरपालनमा भविष्य खोज्दै हुनुहुन्छ । जैमिनी नगरपालिका–१ कुश्मीसेरामा उहाँको पशुपक्षी फार्म छ । फार्ममा अहिले ४२ बङ्गुर छन् । गत साउनबाट सुरु गरेको बङ्गुरपालन व्यवसायमा उहाँले रु २१ लाख लगानी गर्नुभएको छ ।
फार्ममा एक सय ७० बङ््गुर पाल्ने क्षमता छ । बङ्गुर थप्दै जाने योजनामा राना हुनुहुन्छ । गत भदौयता बङ्गुर बेचेर चार लाख जति कमाइ भित्राएको उहाँले सुनाउनुभयो । बङ्गुरपालक किसानले धेरैजसो पाठापाठीबाट आम्दानी गर्छन् । मासुका लागि बेच्दा प्रतिकिलो रु. तीन सय ७० सम्म पर्छ । महिनादिन पुगेका पाठापाठी रु. ६ हजारमा बिक्री हुने गरेको किसान बताउँछन् ।
माउ बङ्गुरले एकै बेतमा १६÷१७ वटासम्म पाठापाठी पाउँछ । “फार्मबाट धेरै पाठापाठी नै बिक्री हुन्छन्, हुर्केका बङ्गुर मासुका लागि बजार जान्छ”, व्यवसायी रानाले भन्नुभयो, “बजार माग बढ्दै गएकाले बङ्गुरमा गरेको लगानी खेर जाँदैन, व्यवसाय सन्तोषजनक नै छ ।” उहाँले पहिले सोही ठाउँका याम पुनले चलाएको फार्म किन्नुभएको हो ।
बङ्गुर फार्मसँगै उहाँको ब्लक उद्योग पनि छ । दुवै व्यवसायमा उहाँको रु ३२ लाख जति लगानी छ । छ जनाले रोजगारी पाएका छन् । उहाँले ब्लक र फार्मका लागि वार्षिक रु ४२ हजार तिर्ने गरी ठेउलेखोलाछेउ जग्गा भाडामा लिनुभएको छ ।
उहाँकोसँगै त्यहाँ अरुपनि बङ्गुर फार्म लहरै छन् । जेनिसा बङ्गुर फार्ममा रहेका ३० बङ्गुरमध्ये छ ब्याउने छन् । ती सबै ब्याउँदा पाठापाठीले खोर भरिभराउ हुन्छ । फार्मका सञ्चालक कमला थापाले दुई वर्षदेखि बङ्गुरपालन व्यवसायमा लागेको बताउनुभयो । कुश्मीसेरा बजारमा उहाँको मासु पसल पनि छ ।
श्रीमान जंगबहादुरसँगै उहाँ बङ्गुरपालनमा रमाइरहनुभएको छ । “आफ्नै मासु पसल पनि भएकाले बङ्गुर बेच्न सहज छ, पाठापाठीबाट पनि राम्रो कमाइ हुन्छ” उहाँले भन्नुभयो, “हामीसँगै कुश्मीसेरा बजार आसपासमा १५ बढी किसान बङ्गुरपालनमा लाग्नुभएको छ, व्यवसायबाट सबै खुसी हुनुहुन्छ ।”
यही नजिकै विकास श्रीसको बङ्गुरपालन व्यवसाय छ । त्यहाँ अहिले १७ वटा बङ्गुर छन् । १२ लाख खर्चेर तीन वर्षअघिदेखि बङ्गुर फार्म चलाएको श्रीसले बताउनुभयो । उहाँसँग हाँस र माछापालन गर्ने योजना पनि छ । वार्षिक रु. २१ हजार तिर्नेगरि जग्गा भाडा लिएर श्रीसले फार्म खोल्नुभएको हो ।
मासु र पाठापाठीको माग बढेपछि बङ्गुरपालनमा किसानको आकर्षण बढेको जैमिनी नगरपालिकाका पशु शाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद ढकालले बताउनुभयो । अहिले गाउँगाउँमा व्यावसायिक रुपमा बङ्गुर पाल्ने क्रम बढेको उहाँको अनुभव छ । पहिले थोरै पाल्ने किसानले पनि अहिले संख्या बढाउँदै लगेका छन् । लगानी थपेका छन् ।
दर्ता भएका र मापदण्ड पूरा गर्ने बङ्गुरपालक किसानलाई नगरपालिकाबाट प्रोत्साहन अनुदानबापत रु. २५ हजार सहयोग गरिएको पशु शाखा प्रमुख ढकालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जैमिनीभरिमा सयभन्दा बढी किसान बङ्गुरपालन व्यवसायमा छन् । व्यवसाय दर्ता गरेर चलाउनेको संख्या भने कम छ ।
२१ पुष २०७८, बुधबार १४:४७ प्रकाशित